Portenta H7: zvese zvaunoda kuti uzive nezve ino papuratifomu | Mahara emahara
Portenta H7: zvese zvaunoda kuti uzive nezve ino papuratifomu
Ku Consumer Electronics Show muLas Vegas, hukuru hukuru hwetekinoroji hwakaunzwa. Arduino akashandisawo kuratidza zvimwe zvezvombo zvaro zvakavanzika izvo zvaachazoshandisa. Uye haina kuenda isingazivikanwe pakati pemafoni efoni, akangwara maTV, mota dzemagetsi, uye IoT kumba zvishandiso. Rutsva rwakadaidzwa Simba H7 uye yaive nzvimbo yekutarisisa kune vadikani venzvimbo inozivikanwa yekuvandudza.
Ichokwadi kuti Arduino akatarisa kusvika pari zvino pa musika wekudzidzisa uye wevagadziri kana vanoda DIY. Kunyangwe mahwendefa avo akaratidzirwa Pro anogona zvakare kushandiswa mune ino yevatengi nharaunda kune mamwe mapurojekiti. Kunyangwe chiri chokwadi kuti kune mamwe mapurojekiti ehunyanzvi akashandisa Arduino sehwaro ...
Asi ikozvino vanoenda kumberi nePortenta H7 uye vakaigadzira kunyanya nevanyanzvi mupfungwa. Ivo vanhu kana makambani anoda kuvandudza mapurojekiti ehurdware nekukurumidza uye akasimba ku maindasitiri mafomu.
1 Chii chinonzi Portenta H7?
1.1 2 cores mune yakafanana
1.2 Graphic akisarareta
1.5 Mamwe mahwendefa enhare
1.6 Datasheet uye mamwe magwaro
Chii chinonzi Portenta H7?
Kunyangwe uri iwo mutengo unogona kuve unodhura kune vanogadzira uye nedanho redzidzo, izvi hazvisanganisirwe pakushandiswa kwazvo. Uyezve, pane zvimwe mabhodhi ekuvandudza uye maSBC ane mitengo yakafanana kana yakatokwera.
Ehe, hunhu kubva kuPortenta H7 ita kuti iri bhodhi rive kure kure kubva kuchinyakare Arduinos. Uye ndeyekuti chikamu icho chakanangiswa chinoda icho, sezvo mamwe ma8-bit MCU machipisi angave asingakwanise, kana zvimwe zvikwaniso zvemamwe mabhodhi emhuri. Zvimwe zvine simba simba ma microcontroller anodikanwa muindasitiri.
Chimwe chiitiko chinoita kuti chiwedzere kunakidza ndechekuti kwete chete iyo inogona kugadziridzwa nemitauro yepamusoro-soro seiya ataurwa pamusoro uye chaiwo-enguva mabasa, zvakare inotsigira AI (yekunyepedzera njere) ine TensorFlow, uku uchichengetedza yakaderera latency kushanda nekutenda kune yakagadziriswa Hardware. Semuenzaniso, zvingave zvichikwanisika kumhanya kodhi yakanyorwa yeArduino padivi peMicroPython uye chengetedza tsanga mukutaurirana.
Shandisa iyo Portenta Carrier Board fomati kuti uchinje iyo H7 kuita eNUC, ndokuti, ine simba minicomputer iyo inogona kuita zvese zvaunoita izvozvi neArduino uye nezvimwe, sekushandisa macomputer kuona algorithms kune otomatiki nendege michina, uku uchichengetedza yakaderera-chikamu kudzora mota, rudders, nezvimwe.
Muchidimbu, ndiro yakanyanya kugadzirirwa indasitiri kana senge rabhoritari zvinhu, kugona kushandisa chiratidzo chemakomputa, PLCs, indasitiri yakagadzirira mushambadziro, marobhoti kudzora, akakosha ekushandisa zvishandiso, yakakwira kutanga-kumusoro kumhanya (ms).
2 cores mune yakafanana
Iyo yepakati processor yePotenta H7 iri mbiri-musimboti STM32H747 kubva ku STMicroelectronics. French-yakagadzirirwa machipisi kubva kumhuri ye STM-32 iyo inosunga 32-bit ARM-based microcontroller mukati mefa. Mune ino kesi, iwo akasarudzwa ekugadzirisa macores ndiyo Cortex M7 inomhanya pa480Mhz uye Cortex M4 inomhanya pa240Mhz.
Aya maviri macores ari kuburitswa kuburikidza nemuchina unonzi Remote Procedure Call iyo inobvumidza isina mushe basa kufona kune imwe processor. Vaviri processor vanogovana zvinongedzo uye vanogona kumhanya:
Arduino IDE mifananidzo sezvakangoita rimwe bhodhi reArduino. Ichazviita pane ARM Mbed OS. Iyi inoiswa midzi yekushandisa yeplatifomu iyi inoshandiswa muIoT zvishandiso neCortex-M.
Iwe unogona zvakare kumhanya zvechinyakare maapp yeMbed.
Chimwe chiitiko chakabatanidzwa muPortenta H7, uye chimwe chezvinonyanya kushamisa futi, mukana we batanidza bhodhi neyekunze yekutarisa, sekunge yaive komputa. Nenzira iyi, iyo inokutendera iwe kuti ugadzire yako yakatsaurwa yakadzamidzirwa komputa ine yayo yega mushandisi interface.
Uye kuti izvo zvigoneke a GPU pa-chip mukati me STM32H747. Mune ino kesi, iri Chrom-ART Accelertor, ine yayo encoders uye madhodhi eJPEG.
Iyo ine nhamba hombe yemapini aunogona kuronga uye kushandisa kune ako mapurojekiti. Portenta H7 ine 80 mapini yakakwira-density kubatana pabhodhi. Izvo zvinopa iyo bhodhi yakanaka scalability uye kukuru kuchinjika maererano nemaapplication uye zvingangodaro zvigadziriso zvaunoda. Izvo zvichave zvinoenderana neakawanda e zvemagetsi zvinhu yakaonekwa pane ino blog uye nezvimwe.
Portenta H7 mamaboardboard zvakare inosanganisira kubatana WiFi neBluetooth, kuti ukwanise kuibatanidza nenetiweki kuti ibatanidzane nezvimwe zvinhu. Naizvozvo, iwe haudi mamwe ma module akadai se mamwe mabhodhi eArduino. Ehezve, inotsigirawo mamwe maratidziro akaita seUART, SPI, Ethernet, I2C, kubatana kwakasiyana-siyana kuburikidza neUSB-C (Ratidza Port yekutarisa, kuendesa simba kwezvigadzirwa zveOTG, ...), nezvimwe.
Mamwe mahwendefa enhare
Portenta H7 (inozivikanwawo nekodhi zita H7-15EUNWAD) inouya neinotevera:
8MB SDRAM ndangariro
16MB KUNA flash memory
NXP SE050C2 Crypto chip, yekuchengetedza
Murata 1DX Module yeWiFi / Bluetooth
DisplayPort chinongedzo pamusoro peUSB-C
Magetsi ne5V PSU (maseketi anoshanda pa3.3v)
Tsigiro yeLi-Po Imwe Seli mabhatiri, 3.7V, 700mAh mashoma
Inoshanda tembiricha renji pakati -40 uye 85ºC
MKR musoro wemaindasitiri nhoo
8-bit kamera interface kusvika ku80 Mhz
Yakabatanidzwa ADC / DAC
Simba rekushandisa mune yakamira-ne mode 2.95 μA (Backup SRAM OFF, RTC / LSE ON)
Datasheet uye mamwe magwaro
Kana iwe uchida rumwe ruzivo nezve iyo Portenta H7 uye nezvayo zvikamu, unogona kudhawunirodha izvi zvinyorwa kana madhata yakabatsira:
STM32H7 yakakosha chip
NXP SE050 Chengetedzo Element
Murata 1DX yekubatanidza module
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Portenta H7: zvese zvaunoda kuti uzive nezve ino papuratifomu
PCF8574: About I2C I / O Kuwedzera kweArduino